2BR Unit 1200sqft w/ Ikhishi Laundry Clubhouse Gym - I-Airbnb
2BR Unit 1200sqft w/ Ikhishi Laundry Clubhouse Gym
Igumbi e-ihhotela ibungazwe ngu-ResortShare5
Isitimela sisebenza eduze ne-resort futhi kungase kulindelwe umsindo othile. Indawo yokubhukuda yangaphandle/ubhavu wamanzi ashisayo uyizinkathi zonyaka futhi unikezwa Usuku Lwesikhumbuzo kuze kube Ngosuku Lwezisebenzi.
Amayunithi abakhubazekile nokuzwakalayo ayatholakala uma etholakala uma ecelwa. Zonke izicelo azikwazi ukuqinisekiswa kodwa sizokwenza konke okusemandleni ethu ukwamukela zonke izivakashi.
Amagama ezivakashi azobhukhwa ekubhukheni ezinsukwini ezingu-20 ngaphambi kokufika kuye ngokuthi i-oda lakho litholwe nini.
Ukwakha: Okwamanje kukhona ukwakhiwa
kwendawo yokugcina impahla eduze ne-resort, ngaphandle kwendlu kuze kube u-July, 2022. Kungaba nomsindo omncane wokwakha ngesikhathi sokuhlala kwakho
Amayunithi ahlotshiswe kahle futhi anefenisha enethezekile ezokwamukela ekhaya lakho kude nasekhaya. Lawa mayunithi ama-2 Bedroom anekhishi eligcwele onawo futhi ukuba lula kwe…
5.0 (izibuyekezo ezingu-12)